Niyad jabsan oo ka warwarsan qoyskeyga – maxaan sameyn karaa? - Youmo
Jag är ledsen och orolig för min familj - somaliska
Salaam. Waxaan ka warwarsanahey qoyskeyga kuwaas oo ku hadhsan wadankeyga iyagoo aan waxbadan ka fikiro. Maxaan sameeyaa markaan niyad jabsanahay oo aan warwarsaney?
Ma aha wax cajiib ah inaad dareento niyad jab iyo warwar marka ay qoyskiinu ku hadhsan yihiin wadankiina, marka aad adiguna halkan Swiidhan joogto. Dadka intooda badan sidaas ayay dareemi karaan xaaladaas mid la mid ah.
Waxa ka dhib yaraan karta dareemadaa qalafsan, haddii aad si ka wanaagsan isku daryeesho. Halkan ayaa waxa ku dhigan dhowr talooyin ah:
Isku dey inaad sameyso waxyaalaha aad is leedahay waa ay xiiso badan yihiin ee ku dejiya, xataa haddii aad dareemayso niyad jab. Waxad u baahan tahay inaad marmar ka nasato waxyaalaha qalafsan, si aad dareenka ugu qaabisho hadhow.
Isku naxariiso oo ixtiraam naftaada. Waa muhiim marka aad ku jirto xaalad qalafsan, marka aad halkan joogto iyadoo aan qoyskaagu halkan joogin.
Isku dey inaad wax cunto oo aad in kugu filan seexato. Waxa muhiim ah in wax wanaagsan la dareemo. La xidhiidh rugta caafimaadka haddii ay dhibaato kaa haysato hurdada. Waxa lagu siin doonaa daawada hurdada ama wax kale oo lagugu caawiyo, haddii aad taas u baahan tahay.
Jimicso. Waxaad tusaale ahaan soo luglugeyn kartaa maalin walba. Markaas ayuu jidhku sii deynayaa maado wanaagsan marka aad warwarsan tahay ee aad niyad jabsan tahay.
Haddii aad dugsiga aado waa inaad taas sii wadato. Waxa wanaagsan in la sameeyo wax maalintii la qabto.
Waxaad caawimo ka heli kartaa xarunta daryeelka dhalinta, ungdomsmottagning. Halkaas ayaad qof kala hadlaysaa sidaa tahay, waxaad dareemayso iyo waxaad ka fikireyso. Taas ayaa kuu wanaagsanaan karta.
MawduucIn wax xun la dareemo